महान दशैँ पर्वको बिरोधमा कालो टीका ! «
महान दशैँ पर्वको बिरोधमा कालो टीका !
प्रकाशित मिति :6October, 2019 12:33 pm
हामीले ०४६/०४७ साल देखि महान पर्व “विजय दशैँ/बढा दशैँ” बारे आफ्नो जिज्ञासा राख्न थालियो । कि, को माथि कस्को विजय ? र के को विजय ? तर वास्तविक उत्तर अहिले सम्म पाउन सकिएको छैन, मेरो जिज्ञासा यथावत नै छ । केही दिन अघि मात्रै मैले एक समाचार पढ्न पाएको थिएँ । कुनै online द्वारा लेखिएको थियो । कि भारतको छत्तीसगढमा त्यहाँको आदिवासीहरुले प्रशासनलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको समाचार थियो । अचानक मलाई चासो लाग्यो ।
त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो कि छत्तीसगढमा एक दुर्गाको प्रतिमा छ, त्यस्को नजिकै अमानवीय अथवा भक्षक दृष्य सहितको महिसासुरको पनि प्रतिमा निर्माण गरिएको बारेमा बिरोधको निम्ति ज्ञापनपत्र थियो ।
अब हाम्रो जिज्ञासाको क्षेत्र अझै फराकिलो भएको छ । यदि छत्तीसगढको समाचार सही हो भने हामिले भन्दै आइएको विषय चाहिँ यो एउटा मानव समाजको अक्षेम्मे नरसंहार हो ! भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
तल्लो अनुच्छेदमा लेखिएको थियो कि विजय दशमी भनिएको दिनमा बिहानै रावणको पुत्ला जलाए पछि विजय उत्सवको रुपमा हर्षोल्लास मनाइन्छ । अझै लेखिएको थियो कि छत्तीसगढको आदिवासी समुदायले धेरै वर्ष अघि देखि यसो नगर्न भनी प्रशासनलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको तर प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको, अब पनि बेवास्ता गरे त्यस विरुद्ध कडाइका साथ उत्रने नै समाचारको मुल भाव थियो । अर्थात महिसासुर र रावण आदिवासी समुदायको नेता थिए भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
अब हाम्रो जिज्ञासाको क्षेत्र अझै फराकिलो भएको छ । यदि छत्तीसगढको समाचार सही हो भने हामिले भन्दै आइएको विषय चाहिँ यो एउटा मानव समाजको अक्षेम्मे नरसंहार हो ! भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैकारण ब्राह्मणवादले नेपालको आदिवासीलाई पनि जबर्जस्ति मान्न लगाएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यदि त्यसो हो भने हिन्दु दर्शनको प्रभावले नेपालमा, घुम्ने मेच माथिको अन्धो मान्छेको वास्तविक चरितार्थ भैरहेको छ । अब रह्यो बढा दशैँ टिकाको विरुद्धमा कालो टीका, यस विषय प्रति मेरो पनि केही फरक धारणा रहन्छ । जस्तै विजय दशमीकै तिथि, मिति र उही साइत वा उही महोत्सवको अवसर पारेर जुनसुकै रंगको टीका लाए ता पनि आखिर दशैँ मानेकै हुन्छ । यसमा कोही अछुतो रहेको नौटंकी देखाउन जरुरी छैन ।